Apple waxay sii deyneysaa iTunes 12.1.2 Ku darida Taageerada Sawirada | Wararka IPhone
Apple ayaa soo saartay dhowr saacadood ka hor cusboonaysiinta iTunes, gaar ahaan nooca 12.1.2. Cusboonaysiinta waxaa ka mid ah hagaajinta iswaafajinta barnaamijka cusub ee Sawirada in shalay ayuu ka yimid gacanta Yosemite OS X 10.10.3 kuna darayaa isbeddelo kala duwan oo ka dhaca daaqadda "Hel Macluumaad" inaad na siiso a macluumaad cad oo ka saxsan. Dhanka kale, hagaajinta xasilloonida adduunka ee dalabka sidoo kale waa lagu daray.
Macluumaadka ku saabsan cusbooneysiinta waxaan ka akhrisan karnaa:
Cusboonaysiintaani waxay hagaajineysaa taageerada iskuxirida sawirada ee iPhone, iPad, iyo iPod taabashada barnaamijka cusub ee Sawirada ee OS X. Intaa waxaa dheer, cusbooneysiintani waxay kudareysaa dhowr isbadal daaqada Get Info waxayna hagaajineysaa xasiloonida guud ee barnaamijka.
Uma muuqato wax cusbooneysiin weyn, laakiin wali waa muhiim u ah dhammaan dadka isticmaala ee ka soo adeegsaday iPhoto ama Aperture si ay u isticmaalaan arjiga Sawirada. Waa in la xusuusnaado in codsiyada cusub ee Apple Photos ay beddeleen iPhoto iyo Aperture labadaba waxayna na siinayaan is-dhexgal fidsan oo sifiican ugu habboon Yosemite OS X waxayna na siisaa khibrad ku dhow midka aan horeyba ugu isticmaalnay aaladaha iOS-ka.
Cusboonaysiinta ayaa ah loo heli karo labadaba Mac OS X iyo Windows. Isticmaalayaasha OS X, cusbooneysiintu waa waxaa laga heli karaa qaybta cusbooneysiinta ee Mac App Store. Waxa kale oo loo heli karaa in laga soo dejiyo degelkeeda rasmiga ah.
Soo dejiso iTunes.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iTunes » iTunes waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 12.1.2 oo lagu daro taageerada arjiga sawirada iyo horumarin kale
Ilaa goorma ayaan u baahan doonnaa PC si loo abaabulo iPhone an
Jawaab JosSe Luis Santos
iTunes waa habka saxda ah ee loo abaabulo taleefankaaga, faallooyinkaagu waa wax lagu qoslo.
Jawaab Michael Duarte
iTunes ayaa ka baxay moodadii ... ilaa 2001 isla waxaas oo kale ayaa la sameeyaa waa in JAILBILLL loo diro iTunes iyo Iidaha barakaysan!
Ma jiraan dhibaatooyin weli ka taagan JAILBREAK?